भारतमा सेप्टेम्बरसम्म कोरोनाको खोप बन्ने दाबी, १ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराइने – Koshidaily
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यभारतमा सेप्टेम्बरसम्म कोरोनाको खोप बन्ने दाबी, १ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराइने
भारतमा सेप्टेम्बरसम्म कोरोनाको खोप बन्ने दाबी, १ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराइने
काठमाडाैं- भारतमा कोरोना भाइरसको खोप बनाउने तयारी गरेको दाबी गरिएको छ। पुणेको सिरम इस्टिच्युटका सिइओ अडर पुनावालाले यो ट्रायल सफल भएमा औषधि यो वर्षको सप्टेम्बर या अक्टुवरसम्म बजारमा आउने दाबी गरेका छन्।
यसरी उत्पादन हुने खोप (औषधि)को मूल्य करिव एक हजार रुपैयाँ हुने उनको दाबी छ। भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकका अनुसार उनीहरुले जोखिम उठाएर एडभान्स परीक्षण गरिरहरेको र उत्पादन पनि सुरु भएको सिइओ पुनावाालाले बताएका छन
के भन्छन सिइओ
उनले बेलायतमा अहिले पनि औषधिको क्लिनिकल ट्रायलको घोषणा भएको तर आफूहरुले उत्पादनको पहल गरिरहेको बताए। ट्रायल सफल भएमा छिट्टै खोप तयार गर्ने उनले बताए।
‘हामीले पहिले नै उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिसकेका छौं किन कि यसको परीक्षण सफल भएमा तत्काल पर्याप्त रुपमा उपलब्ध गराउन सकियोस्,’ उनले भने, ‘मे महिनामै मानिसमा यसको परीक्षण सुरु हुने छ।’ उनले आफ्नो केन्द्र कोरोनाको औषधि बनाउने तयार रहेको र पूर्णरुपमा टिम नै यसमा लागिरहेको बताए।
उनले यसका लागि पुणेमा कारखाना निर्माण भएको र ५००/६०० करोड रुपैयाँको लगानी पनि लगाइएको उनले दाबी गरे। उनले अबको २–३ वर्ष कोरोनाकै औषधि बनाउने काममा कारखाना केन्द्रित हुने बताए।
कहिले र कति उत्पादन हुन्छ?
यो खाेपकाे उत्पादन कहिले सुरु हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा सिइओ पुनावालाले भने ‘अबको तीन सातामा यसको उत्पादन सुरु हुनेछ।’कम्पनीले हरेक महिना ४० देखि ५० लाख डोज बनाउने दाबी गरेको छ। यसपछि उत्पादन बढाएर हर महिना १ करोडसम्म पुर्‍याउने उसको लक्ष्य छ। सेप्टेम्बर–अक्टुबरसम्म उत्पादन बढाएर प्रत्येक महिना ४ करोडसम्म पुग्ने उनले बताए। यसपछि मात्र दोस्रो देशमा निर्यात गरिने उनले बताए।
कस्तो हो कम्पनी?
पुनवालाको यो संस्थानको स्थापना सन् १९६६ मा भएको थियो। यो विश्वभरकै सबैभन्दा धेरै खोप बनाउने कम्पनी मध्येको एक हो।यसले प्रत्येक वर्ष १.५ अर्ब डोज खोप तयार गर्दछ। विश्वका ६५ प्रतिशत बालबालिकालाई यस कम्पनीको खोप दिइने गरिन्छ। सिरम बाहेक कोरोनाको खोप बनाउन बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अमेरिकाको बायोटेक कम्पनी कोडाजेनिक्स पनि लागि परेका छन्।